UPitso ubuka kude ngekusasa likanobhutshuzwayo – Bayede News
by nguLinda Ximba Posted on 7 February 2020 7 February 2020
Kuvela okuvimbe ukuthi ziphothulwe izingxoxo zenkontileka entsha kaPitso Mosimane neMamelodi Sundowns. Inkontileka yalo mqeqeshi iphela ngoNhlangulana kanti izingxoxo zokuyivuselela ziqale ngoZibandlela wonyaka odlule. UMosimane (55) usanda kuveza ukuthi sekusele ama-20% ukuthi kuvunyelwane ngakufunayo bese enikwa inkontileka ezomenza ahlale amasizini amahlanu kuSundowns. Leli phephandaba lithole ukuthi okubekwe eqhulwini nguMosimane ukuthi ufuna ikilabhu imvumele asungule inkulisa yakhe afuna ifane neSchool of Excellence. Kuthiwa usopha ukuyisungula ungakapheli lo nyaka. Okwenza iSundowns ingasheshe ivumele phezulu ukuthi icabanga ukuthi kuzoba khona ukushayisana njengoba nayo vele inayo inkulisa. Ikholwa ukuthi ngeke abe nesikhathi esanele sokunaka umsebenzi wokugxila ekuqeqesheni ikilabhu.
Umthombo osondelene noMosimane uthe: “UPitso ungumuntu ohlale elambele ukwenza izinto abanye abasabayo ukuzenza. Indlela enza ngayo izinto ingathi use-Europe. Ngale nkulisa ufuna ukubumba abadlali abazohlomisa iBafana Bafana yenze kahle emqhudelwaneni efana ne-Africa Cup of Nations neFifa World Cup, iyeke ukuphuma ekuseni. Okunye akusophile ukuthi laba badlali abazobunjwa ufuna bawelele phesheya kwezilwandle. Angeke azibambele mathupha kule nkulisa kepha uzoqasha abaqeqeshi abalolongelwe isipesheli ukucija abafana abancane. Manje ukhiye uselapho ngoba iSundowns ayiyizwisi kahle le nto yakhe. Khona iyafuna ukumgcina ngoba useyisebenzele kakhulu yathola nokuhlonishwa e-Afrika ngenxa yemiphumela emihle afike nayo.” Uqhuba umthombo uthe: “Ukusungulwa kwale nkulisa afuna ibe seSoweto, uPitso ukubona kuzokwenza omkhulu umehluko ebholeni lakuleli esikhathini esingeside. Njengomuntu osezakhele igama e-Afrika, akaboni kuzomsinda ukuphatha le nkulisa. Useziqalile izingxoxo nabaxhasi abazofaka imali ngaleli phupho lakhe.” Ngemuva kokunqoba indebe yesi-9 ekuSundowns ephakamisa eyeTelkom Knockout bedla iMaritzburg United ngamagoli amabili kwelilodwa ngoZibandlela, uMosimane wakuveza kancane ukuthi yini afuna ukuyenza manje ebholeni.
Wathi: “Okusenhliziyweni yami manje ukugxila ebholeni legenge encane. Ngifuna ukugxila lapho ngoba kubukeka sengathi akekho umuntu olikhathalele, abantu bagcina ngokukhuluma nje kodwa awukho umyakazo. Buka nje ibhola lezikole. Ngabe zikhona izinhlelo eziqondile ngalo? Ingakho-ke ngifuna ukugxila kule ndawo. Ngenye yezinto ezisenhliziyweni yami lena okumele iSundowns iyihloniphe. Okumqoka kimi ukuthi ngenze into engiyohlala ngikhunjulwa ngayo. Kimina izindebe akuyona into emqoka kuphela.
Ngifuna ukushiya ebholeni nezingane zami zikhombe ukuthi ubaba washiya elisebenzele ibhola lamazinga aphansi, okuyinto ekungamele ifadalale kalula.” Abadlali abaphume esandleni sakhe ekuSundowns asebedlala phesheya kwezilwandle kubalwa uBongani Zungu noKeagan Dolly abakuLigue 1 eFrance kanye noPercy Tau olihlikihla eBelgium.
“Ngokwami kumele ngabe iNingizimu Afrika inabadlali abahlanu kuSerie A e-Italy, abahlanu kuLigue 1 mhlawumbe nabane ku-English Premier League. Kungani abadlali bakuleli singababoni kuLa Liga? Le ndaba yokuthi sizonqoba izindebe ezifana neTelkom bese sicabanga ukuthi sesazi yonke into ayikho,” washo kanje uMosimane
Uthando lokusebenza nabadlali abancane into uMosimane ayiqala esawumdlali weRita Berlaar eBelgium njengoba wayesiza iqembu lika-Under 11 uma engaxinekile. Uthe esebuyele kuleli wanikwa umsebenzi wokulolonga iqembu elincane leSundowns, ecelwe uTed Dumitru ngoba wayengasitholi isikimu uDaniel “Mambush” Mudau noRaphael Chukwu bevutha ngaleso sikhathi. Wasebenza nabadlali abanjengoMbulelo “OJ” Mabizela, uPeace Gumbi noBenedict “Tso” Vilakazi, abagcina ngokudlalela amaqembu amakhulu akuleli. Kuthe uma esenikwa umsebenzi wenkulisa yeSuperSport United, ngemuva kokukhulunyelwa ezikhulwini umlingani wakudala kuJomo Cosmos, uThomas “Shintsha” Madigage, wavundulula abadlali abanjengoSeuntjie Mothlajwa, uCavaan Sibeko, uGerald Modabi noTsoeu Mokoro. Laba badlali baba umgogodla kuSuperSport eyalala isibili kulogi ngowezi-2002 yaphinde yaphuma kusadlalwa ngokwamaqoqo eCaf Confederations Cup ngowezi-2004. UMosimane, owadlala amasizini ayisithupha eGreece ethathwe engumgadli ku-Orlando Pirates ngowe-1985, usenqobele iSundowns izicoco zeligi ezine selokhu afika maphakathi ngowezi-2012 wayihlenga ezembeni. Usuke lapho wayinqobela iCaf Champions League neCaf Super Cup nokusengumlando ezweni kwazise akekho umqeqeshi ongumsinsi wokuzimilela osenze lokho.